တစ်ဦးအမြီးကိုဒါကမော်ဒယ်ကြယ်တံခွန် Make ရန်2နည်းလမ်းများ
တစ်ဦးကအမှန်တကယ်ကြယ်တံခွန်ပေါင်းများစွာပစ္စည်းများအရောအနှောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကြယ်တံခွန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောဓာတုလက်မှတ်ရှိပြီးနေစဉ်, သူတို့ထဲကအများစုဟာရေရေခဲ, အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ, ဖုန်မှုန့်နှင့်ကျောက်သို့မဟုတ်ကြောတုံးဆံ့။ ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်ကြယ်တံခွန်အောင်နှင့်၎င်း၏အပြုအမူကိုစောငျ့ရှောကျတဲ့ simulated နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေကဖော်ထုတ်ပျော်စရာပါပဲ။ ဤတွင်စစ်မှန်သောသဘောတူညီမှုများကဲ့သို့ပြုမူတဲ့မော်ဒယ်ကြယ်တံခွန်အောင်ဘယ်လိုဖွင့်:
ဤသည်အထူးသဖြင့်စာရွက်ကိုအသုံးပြုသည် အစိုင်အခဲကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ အပူထိတွေ့သည့်အခါကကြယ်တံခွန်အမြီးသို့ sublimate ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် (အခြောက်အရေခဲ) ။
သုံးပါ ခြောက်သွေ့ရေခဲနှင့်အတူသတိ ။ ဒါဟာအလွန်ချမ်းအေးသည်နှင့်သင်ကမထိလျှင် frostbite သငျသညျပေးနိုငျသညျ။ လက်အိတ်ဝတ်ဆင်!
ဖုန်တစ်ခွက်ကို (ဒီအမှန်တကယ်ကြယ်တံခွန်များကဲ့သို့အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် grit, ပါရှိသည်)
သဲတစ်ခွက်ကို (များစွာကိုယျတံခှနျသဲသို့မဟုတ်လင်းကျောက်ကဲ့သို့ silicates ဆံ့)
အခြို့သောမီးသွေး (ယျတံခှနျမီးသွေးနှင့်တူကာဗွန်, ဖြစ်နိုင်သည့်မှောင်မိုက်ပစ္စည်း, မဆံ့)
ရည် (optional ကို - အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ကြယ်တံခွန်အတူတကွကပ်ကူညီပေးသည်)
သတင်းစာ (optional ကို - စင်ကြယ်သော-Up ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သင့် Workspace ပေါ်မှာနေရာ)
သင့်ရဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲထဲမှာရောက်ရှိပါလျှင် ကြီးမားသောတုံး , သင်ကစက္ကူအိတ်၌နေရာကနှိပ်စက်နေတဲ့သံတူနှင့်အတူကတပ်များနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအရဆိုပါက ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲလုံးလေးများ သူတို့ဖြစ်သကဲ့သို့, သင်ကသူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအတူတူရောထွေးနှင့်တစ်ဦး lumpy ဘောလုံးကိုစေရန်အတူတကွသူတို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့သစ်သားဇွန်းသို့မဟုတ်လက်အိတ်လက်ကိုသုံးပါ။ အစစ်အမှန်ယျတံခှနျလိုပဲ, သင့်မော်ဒယ်ဆိတ်ကွယ်ရာကိုချိုးဖျက်ပါစေ။ အဲဒါကိုအတူတူကပ်ကူညီရန်တစ်ခုမှာအစွန်အဖျားကတက်ကောက်နေကဆန်းစစ်မတိုင်မီအချိန်လေး၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ကမော်ဒယ်ပေါ်မှုတ်ကကြယ်တံခွန်အမြီးဖြစ်စေခြင်းငှါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေတိုက်တူအောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသက်ရှု၏အပူနေရောင်၏နွေးထွေးမှုတုပါလိမ့်မယ်။ သင်အမိုးနီးယားအနံ့ပါသလား ရီးရဲလ်ယျတံခှနျနည်းနည်းဝင်းဒိုးကိုသန့်စင်များကဲ့သို့အနံ့!
တစ်ဦးအမြီးနှင့်အတူတစ်ဦးကြယ်တံခွန်တူအောင်ဖန်တီးအခြားသောနည်းလမ်းသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ် အရည်နိုက်ထရိုဂျင် ။ ဒီကြယ်တံခွန်, သင်အရည်နိုက်ထရိုဂျင်သို့စိမ်, ကျောက်တောင်ပစ္စည်းနှစ်နှင့်အခိုးအငွေ့လမ်းကြောင်းကြည့်ဖို့ကဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အရည်နိုက်ထရိုဂျင်ကတည်းက ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲထက်ပင်အေးဖြစ်ပါသည်, သငျသညျရှည်ကိုင်တွယ်မီးညှပ်သုံးလိုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျောက်တောင်ကြယ်တံခွန်ဘို့ A ကောင်းဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုမီးသွေး briquette ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မြင်သောကြယ်တံခွန်ဟာ Oort Cloud ကိုဒါမှမဟုတ် Kuiper ခါးပတ်တစ်ခုခုကိုမှလာကြ၏။ အဆိုပါ Oort Cloud ကိုအဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်အားဝန်းရံသည်ဟုပစ္စည်းတစ်ခုနယ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Kuiper ခါးပတ်နေရဲ့ဆွဲငင်အား၏အကွာအဝေးအတွင်းအများအပြားရေခဲအလောင်းတွေပါဝင်သော Neptune ကျော်လွန်တည်ရှိသောဒေသဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအမှန်တကယ်ကြယ်တံခွန်အေးစက်နေတဲ့ရေ, မြေမှုန့်, ကျောက်ခဲများနှင့်ဖုန်မှုန့်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ညစ်ပတ် snowball တစ်မျိုးဖြစ်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကြယ်တံခွန်မှသုံးပိုင်းရှိပါတယ်:
နျူကလိယ - ထိုကြယ်တံခွန်၏ "ညစ်ပတ် snowball" စိတျအပိုငျးဥက္ကာခဲဖုန်, (ခြောက်သွေ့သောရေခဲများကဲ့သို့) အေးစက်နေတဲ့ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေပါဝင်ပါသည်ရာယင်း၏နျူကလိယဖြစ်ပါသည်။
မေ့မြော - နေရန်လုံလောက်နီးစပ်သည့်ကြယ်တံခွန်ရွေ့လျား၏နျူကလိယကြောင့်ပူနွေးလာသည်နှင့်အေးခဲဓာတ်ငွေ့ငွေ့သို့ sublimate ။
အဆိုပါငွေ့သွားနျူကလိယကနေအတူမြေမှုန့်အမှုန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့။ တစ်ဦးကြယ်တံခွန်၏ fuzzy ပုံသဏ္ဍာန်များအတွက်ဖုန်မှုန့်အကောင့်ကိုပိတ်ထားထင်ဟပ် Light က။
အမြီး - ကြယ်တံခွန်ရွေ့လျားမှု၌ရှိကြ၏, ဒါသူတို့နိုးထအတွက်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဖုန်မှုန့်တစ်လမ်းကြောင်းထားခဲ့ပါ။ အဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေတိုက်လည်းဝေးကြယ်တံခွန်ကနေကိစ္စရပ်ကိုတွန်းပြီးတောက်ပအမြီးထဲသို့ ionizes ။ ယင်း၏တည်နေရာပေါ် မူတည်. တစ်ဦးကြယ်တံခွန်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုအမြီးရှိနိုင်ပါသည်။
ရေရဲ Make လုပ်နည်း
တစ်ဦးကာလဖြစ်ပါသည်ကွန်တိန်နာ Make လုပ်နည်း
ဓာတု Piranha ဖြေရှင်းချက်
ထိရောက်သောတည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက်လက်မ၏5စည်းကမ်းများ
"Chespirito," မက္ကစီကိုရဲ့ရောဘတ်ဂိုမက်ဇ Bolanos ၏ပုံပြင်
X ကို Ray အဓိပ္ပာယ် Properties ကို (X ကိုရောင်ခြည်)
တချို့ကမကြာခဏပုံစကိတ်စီးခြင်း Blade အကြောင်းမေးခွန်းများ
အဆိုပါက IBM 701
0-20 မှစ. ဂျာမန်နံပါတ်များနှင့်မဲရေတွက်
ဖီးလစ် Schlafly Anti-Feminist Quotes
ဂန္ထဝင်ဝတ္ထု '' အိုဗာဗုလုန်မြို့ '' မှစ. quotes
ပဲကနေ Hemagglutinin နှင့်အစာအဆိပ်သင့်
အမေရိကရှိအရေပြား Tone ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှု - အရောင်ကဘာလဲ
ခရစ်စမတ်အဘို့ကြီးသောနျ Classical Music ကိုလက်ဆောင်များ
ယောဟန်သည်ဟော်လန်၏ The အကြားအမြင်ရ Tarot ၏ Pictorial